လေ့ကျင့်ရေးမော်ကွန်းတိုက် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: လေ့ကျင့်ရေး
Tag Archives: လေ့ကျင့်ရေး
Sennheiser SoundAcademy သည် AV ပညာရှင်များအတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများဖြင့်အွန်လိုင်းကိုသွားသည်
Sennheiser SoundAcademy သည်အခမဲ့လိုလားသောအသံလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ webinars နှင့်ထုတ်ကုန်သရုပ်ပြမှုများကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်စတင်ပေးခဲ့သည်။ အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းများမှသည်အသံ၊ ဗီဒီယိုအသံ၊ ကွန်ဖရင့်ပြောင်းသည့်မိုက်ခရိုဖုန်းများအထိအကြောင်းအရာများစွာကိုလွှမ်းခြုံနိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့အားဂီတလုပ်ငန်း၊ AV လုပ်ငန်း၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့များမှပညာရေးနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများမှဖောက်သည်များအတွက်ဖန်တီးထားသည်။
EditShare တွဲဘက်, EditShare အင်ဂျင်နီယာချုပ်နှင့် EditShare အရောင်း Professional ကသင်ယူမှုအပုဒ်ရောင်းအားနှင့်ဗီဒီယိုပညာရှင်များအမ်စတာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန်များအတွက် EditShare ကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်၏ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာဖို့လမ်းကြောင်းကိုအရှိန်မြှင့် - 13 စက်တင်ဘာလ 2019 - ပူးပေါင်း. အထူးပြုကြောင်းEditShare®နည်းပညာခေါင်းဆောင်, လုံခြုံရေး, နှင့်မီဒီယာဖန်တီးမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အသိဉာဏ်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၏ပစ်လွှတ် (2019.A7 ရပ်) ကို IBC35 ပြပွဲကြမ်းပြင်ကနေထုတ်ပြန်ကြေညာ ...
Axon သည် BVE 2019 တွင်စွမ်းအားကောင်းသော IP Processing and Control အပေါ်အာရုံစိုက်သည်
Rising Sun ကရုပ်ပုံများတောင်သြစတြေးလျအတွက်ကြီးထွားလာ Visual Effects စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များလိုအပ်နေဆဲမှပညာရေးအစီအစဉ်တိုးချဲ့
Adelaide, တောင်သြစတြေးလျ-Rising Sun ကရုပ်ပုံများ (RSP) တောင်ပိုင်းသြစတြေးလျနှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှ VFX အလုပ်အကိုင်များဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုအစုံနှင့်အတူကျောင်းသားများကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏ရှေ့တန်းမှာဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ RSP ပညာရေး, တောင်သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်နှင့်အတူလက်တွဲအတွက်မကြာသေးမီကကမ္ဘာ့အဆင့်မီ VFX များအတွက်ကြီးထွားလာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်ဖို့အောင်မြင်သောအစီအစဉ်များကိုတိုးချဲ့ထားပါတယ် ...
VIDELIO Cisco နှင့် EVS နှင့် ပူးပေါင်း. THE 4K နှင့် IP ကို ​​Academy အစီအစဉ်စတင်ခဲ့သော
အမ်စတာဒမ်။ စက်တင်ဘာလ 15, 2017 - VIDELIO, ဦးဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ System Integration, ယနေ့ရောင်းချသူ Cisco သည်နှင့် EVS နှင့်အတူလက်တွဲအတွက် 4K နှင့် IP Academy ၏ပစ်လွှတ်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုအထူးစိတျထဲတှငျအင်ဂျင်နီယာများ, ထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာပညာရှင်များနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကိုနောက်မျိုးဆက်ကို IP-based မှအမွေ Serial ဒစ်ဂျစ်တယ် Interface (SDI) ကွန်ရက်များအနေဖြင့်အဖွဲ့အစည်းများအကူးအပြောင်းကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ် ...
စတူဒီယိုရဲ့ဘွဲ့ရလက်မှတ်အစီအစဉ်များအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအတွက်အလုပ်အကိုင်များကိုတစ် Springboard ဖြစ်လာကြပါပြီ။ Adelaide, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအနုပညာရှင်တွေအယောင်ဆောင်သည်တောင်ပိုင်း Australia-, stardom ဖို့လမ်းကြောင်းကို ပို. ပို. Adelaide, တောင်သြစတြေးလျကစတင်ခဲ့သည်။ Adelaide အခြေစိုက်ထားတဲ့ Rising Sun ကရုပ်ပုံများ, X-Men အပါအဝင်ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများအတွက်အမြင်သက်ရောက်မှုဖန်တီးခြင်းအတွက်ယင်း၏အလုပျအတှကျအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကောင်းချီးစပါးကိုရိတ်လိုက်ပါတယ်: အနာဂတ်၏နေ့ရက်များ ...